जब नयाँ बुहारीलाई सासुले पहिलो पटक देखिन् वेहोस भइन् । यस्तो अनौंठो विवाह भारतको सासाराम, बिहारमा भएको छ, जुन जताततै चर्चा भइरहेको छ। जब सासु बुद्धीले वुहारीलाई देखिन् विवाहलाई स्वीकार गरिनन्। वास्तवमा केटोले किन्नरसँग विवाह गरिसकेका थिए। समाजको कारण, सासूले उनीहरू दुबैलाई घरबाट बाहिर निकालिदिइन् । घटना सासाराम जिल्लाको कारघरको हो। नपुंसकसित विवाह गर्ने युवकको घरमा भनाभन भएको छ। परिवारका सदस्यहरू कुनै शर्तमा बुहारी स्वीकार गर्न तयार थिएनन्।**थप भिडियो यहाँ तल क्लिक गर्नुहोस्**,
जानकारीका अनुसार कर्गहारका गोलू पहिले डान्स पार्टीमा काम गर्थे। यसैबीच उनी पानापुर निवासी किन्नर नन्दनीसँग प्रेममा परे। दुवैले सँगै बस्ने निर्णय गरे र विवाह गरे। विवाह पछि गोलू आफ्नी श्रीमती नन्दनीसँग कारघरको एउटा भाडाको घरमा बस्दै थिए। परिवारका सदस्यहरूले जब यो कुरा थाहा पाए, तिनीहरूले दबाब दिएर छोरालाई किन्नर बुहारीबाट अलग गर्ने प्रयास गरे। तर जब केहि चीजहरू काम गरेनन्, तिनीहरूले बुझे पछि उनीहरूले आफ्नो छोरोलाई घरमा ल्याए।
जानकारीका अनुसार कर्गहारका गोलू पहिले डान्स पार्टीमा काम गर्थे। यसैबीच उनी पानापुर निवासी किन्नर नन्दनीसँग प्रेममा परे। दुवैले सँगै बस्ने निर्णय गरे र विवाह गरे। विवाह पछि गोलू आफ्नी श्रीमती नन्दनीसँग कारघरको एउटा भाडाको घरमा बस्दै थिए। परिवारका सदस्यहरूले जब यो कुरा थाहा पाए, तिनीहरूले दबाब दिएर छोरालाई किन्नर बुहारीबाट अलग गर्ने प्रयास गरे। तर जब केहि चीजहरू काम गरेनन्, तिनीहरूले बुझे पछि उनीहरूले आफ्नो छोरोलाई घरमा ल्याए।**थप भिडियो यहाँ तल क्लिक गर्नुहोस्**,
जब नन्दनीलाई यो कुरा थाहा भयो, उनी घरमा छन् । खोज्दै नन्दनी पनि गोलूको घरमै पुगीन्। किन्नर बुहारीलाई यहाँ देखेर सासु बेहोस भइन् । अवस्था झनै नराम्रो हुँदै गयो जब नन्दिनीले आफ्नो सासुलाई पानी छर्काएर होशमा ल्याउने प्रयास गरिन्। यो दृश्य देखेर वरपरका मानिसहरू आफ्नो घरतिर लाग्न थाले। सासूलाई होसमा आउने बित्तिकै उनले छोरा र बुहारी दुवैलाई घरवाट निकालिदिइन् । दुबै पति र पत्नी नजिकको आफन्तको घरमा गएका छन्।
छोराले प्रेम विवाह गरेकी बुहारी घर खोज्दै आइन् । जब नयाँ बुहारीलाई सासुले पहिलो पटक देखिन् वेहोस भइन् । यस्तो अनौंठो विवाह भारतको सासाराम, बिहारमा भएको छ, जुन जताततै चर्चा भइरहेको छ। जब सासु बुद्धीले वुहारीलाई देखिन् विवाहलाई स्वीकार गरिनन्। वास्तवमा केटोले किन्नरसँग विवाह गरिसकेका थिए। समाजको कारण, सासूले उनीहरू दुबैलाई घरबाट बाहिर निकालिदिइन् ।**थप भिडियो यहाँ तल क्लिक गर्नुहोस्**,
घटना सासाराम जिल्लाको कारघरको हो। नपुंसकसित विवाह गर्ने युवकको घरमा भनाभन भएको छ। परिवारका सदस्यहरू कुनै शर्तमा बुहारी स्वीकार गर्न तयार थिएनन्। जानकारीका अनुसार कर्गहारका गोलू पहिले डान्स पार्टीमा काम गर्थे। यसैबीच उनी पानापुर निवासी किन्नर नन्दनीसँग प्रेममा परे। दुवैले सँगै बस्ने निर्णय गरे र विवाह गरे। विवाह पछि गोलू आफ्नी श्रीमती नन्दनीसँग कारघरको एउटा भाडाको घरमा बस्दै थिए। परिवारका सदस्यहरूले जब यो कुरा थाहा पाए, तिनीहरूले दबाब दिएर छोरालाई किन्नर बुहारीबाट अलग गर्ने प्रयास गरे।
तर जब केहि चीजहरू काम गरेनन्, तिनीहरूले बुझे पछि उनीहरूले आफ्नो छोरोलाई घरमा ल्याए। जब नन्दनीलाई यो कुरा थाहा भयो, उनी घरमा छन् । खोज्दै नन्दनी पनि गोलूको घरमै पुगीन्। किन्नर बुहारीलाई यहाँ देखेर सासु बेहोस भइन् । अवस्था झनै नराम्रो हुँदै गयो जब नन्दिनीले आफ्नो सासुलाई पानी छर्काएर होशमा ल्याउने प्रयास गरिन्। यो दृश्य देखेर वरपरका मानिसहरू आफ्नो घरतिर लाग्न थाले। सासूलाई होसमा आउने बित्तिकै उनले छोरा र बुहारी दुवैलाई घरवाट निकालिदिइन् । दुबै पति र पत्नी नजिकको आफन्तको घरमा गएका छन्।**थप भिडियो यहाँ तल क्लिक गर्नुहोस्**,
जब नयाँ बुहारीलाई सासुले पहिलो पटक देखिन् वेहोस भइन् । यस्तो अनौंठो विवाह भारतको सासाराम, बिहारमा भएको छ, जुन जताततै चर्चा भइरहेको छ। जब सासु बुद्धीले वुहारीलाई देखिन् विवाहलाई स्वीकार गरिनन्। वास्तवमा केटोले किन्नरसँग विवाह गरिसकेका थिए। समाजको कारण, सासूले उनीहरू दुबैलाई घरबाट बाहिर निकालिदिइन् । घटना सासाराम जिल्लाको कारघरको हो। नपुंसकसित विवाह गर्ने युवकको घरमा भनाभन भएको छ। परिवारका सदस्यहरू कुनै शर्तमा बुहारी स्वीकार गर्न तयार थिएनन्।
जब नन्दनीलाई यो कुरा थाहा भयो, उनी घरमा छन् । खोज्दै नन्दनी पनि गोलूको घरमै पुगीन्। किन्नर बुहारीलाई यहाँ देखेर सासु बेहोस भइन् । अवस्था झनै नराम्रो हुँदै गयो जब नन्दिनीले आफ्नो सासुलाई पानी छर्काएर होशमा ल्याउने प्रयास गरिन्। यो दृश्य देखेर वरपरका मानिसहरू आफ्नो घरतिर लाग्न थाले। सासूलाई होसमा आउने बित्तिकै उनले छोरा र बुहारी दुवैलाई घरवाट निकालिदिइन् । दुबै पति र पत्नी नजिकको आफन्तको घरमा गएका छन्।**थप भिडियो यहाँ तल क्लिक गर्नुहोस्**,
छोराले प्रेम विवाह गरेकी बुहारी घर खोज्दै आइन् । जब नयाँ बुहारीलाई सासुले पहिलो पटक देखिन् वेहोस भइन् । यस्तो अनौंठो विवाह भारतको सासाराम, बिहारमा भएको छ, जुन जताततै चर्चा भइरहेको छ। जब सासु बुद्धीले वुहारीलाई देखिन् विवाहलाई स्वीकार गरिनन्। वास्तवमा केटोले किन्नरसँग विवाह गरिसकेका थिए। समाजको कारण, सासूले उनीहरू दुबैलाई घरबाट बाहिर निकालिदिइन् ।
घटना सासाराम जिल्लाको कारघरको हो। नपुंसकसित विवाह गर्ने युवकको घरमा भनाभन भएको छ। परिवारका सदस्यहरू कुनै शर्तमा बुहारी स्वीकार गर्न तयार थिएनन्। जानकारीका अनुसार कर्गहारका गोलू पहिले डान्स पार्टीमा काम गर्थे। यसैबीच उनी पानापुर निवासी किन्नर नन्दनीसँग प्रेममा परे। दुवैले सँगै बस्ने निर्णय गरे र विवाह गरे। विवाह पछि गोलू आफ्नी श्रीमती नन्दनीसँग कारघरको एउटा भाडाको घरमा बस्दै थिए। परिवारका सदस्यहरूले जब यो कुरा थाहा पाए, तिनीहरूले दबाब दिएर छोरालाई किन्नर बुहारीबाट अलग गर्ने प्रयास गरे।**थप भिडियो यहाँ तल क्लिक गर्नुहोस्**,
Previous १३ हजार ६ सय रुपैयाँले स’स्तियो सु’नको भाउ, प्रतितोला कतिमा झ’र्यो ?
Next आफ्नो इच्छा अनुसार छोरा वा छोरी जन्माउने सजिलो तरिका यस्तो छ, गते र बारनै तोक्न सक्ने हेर्नुस खर्च कति ? (भिडियो)